Ogaden News Agency (ONA) – Deg Deg: Dhalinyaro Gadooday oo Duurka Gashay Gobolka Shiniile.
Deg Deg: Dhalinyaro Gadooday oo Duurka Gashay Gobolka Shiniile.
Wararka naga soo gaadhaya Gobolka Shiniile ee galbeedka wadanka Ogadenia ayaa sheegaya kacdoon shacab oo lagaga soo horjeedo taliska wayaanaha oo kabilowday deegaano kamid ah Gobolka Shiniile.
Sida xogta aan kuhelayno dhalinyaro badan oo kabiyo diiday dhaqan xumada xukuumada wayaanaha iyo dhibaatada ay shacabka kuhayaan ayaa hubka qaatay isla markaana duurka galay si ay udifaacaan dalkooda, dadkooda iyo diintooda wanaagsan.
Dhalintan gadooday ayaa lasheegayaa in ay dab qabadsiiyeen 2 booyadood oo shidaal waday kuwaas oo kusii jeeday magaalada Addis Ababa, waxaana lasheegayaa in ay dhalintu siwayn uga howl galaan deegaanka Garab Ciise lagumagacaabo.
Xukuumada khalkhashan ee wayaanaha ayaa lasheegayaa in ay Gobolka Shiniile udaad gureeyeen ciidan aad ubadan, waxaana lagusoo waramayaa in ay ciidamadu dad aad ubadan xidh xidheen.
Dhinaca kale qaar kamid ah madax kusheegta wayaanaha ayaa gaadhay Gobolka Shiniile si ay odayaasha ugu qanciyaan in ay dhalinta gadooday sooxareeyaan taas oo sida lasheegayo aan suuragal noqon doonin.
Dadka kudhaqan Gobolka Shiniile ayaa indhawaalaba marti unoqday dhibaatooyin kala duwan oo isugu jira xidhay baahsan iyo waliba cunaqabatayn dhanka ganacsiga iyo nolosha ah, waxayna shacabku umuuqdaan kuwo u istaagay laxisaabtanka gumaysiga iyo cawaantiisa.
Dhanka kale dadka Gobolka Shiniile ayaa aad uga xumaaday dhul aad ubalaadhan oo ay leeyihiin dadka Soomaalida ah ee Gobolka Daga, kaas oo si qasab ah loogu wareejiyay qoomiyada Canfarta.
Xiisada Shiniile iyo wixii kasoo kordha kala soco ONA.